भरतपुरमा प्रचण्ड पुत्री पराजित हुँदा कसरी हुन्छ दुर्घटना ? « dainiki
२६ बैशाख २०७९, सोमबार २३:५२
भरतपुरमा प्रचण्ड पुत्री पराजित हुँदा कसरी हुन्छ दुर्घटना ?
२६ वैशाख, काठमाडाैँ । मतदान गर्नेदिन नजिकिँदै जाँदा नेताहरु जित हारको दाउँपेचमा व्यस्त छन् । स्थानीय स्तरको निर्वाचन भए पनि दलका शीर्ष नेताहरुको दौडधुपले गर्दा यसलाई संघीय चुनावको झल्कोको रुपमा लिन सकिन्छ । हुन त संघीय संसद अघि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा प्राप्त हुने नतिजाले संघीय नतिजाको एक खालको चित्र देख्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: २६ बैशाख २०७९, सोमबार २३:५२